Dowladda Spain oo ka qayb qaadanaysa taageerada dayn cafinta Soomaaliya - Tilmaan Media
Dowladda Spain oo ka qayb qaadanaysa taageerada dayn cafinta Soomaaliya
in DHAQAALE, SOOMAALIYA
Golaha Wasiiradda Spain ayaa ansixiyay tabarucaad gaaraya 4,074,536.54 yuuro oo loogu talagay gargaarka dayn cafinta Soomaaliya ee Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF).
Spain waxay sheegtay in tallabadan ay xoojineyso ballanqaadka xasilloonida siyaasadeed iyo horumarka dhaqaale ee Soomaaliya, oo mas’uuliyiinteedu ay sameeyeen dadaal la taaban karo sannadihii ugu dambeeyay si ay dib ugu soo celiyaan xiriirkii dhaqaale ee ay Soomaaliya la lahayd bulshada caalamka.
Bishii Maarso Soomaaliya ayaa ku biirtay Hindisaha barnaamijka dayn cafinta ee wadamada aad u saboolka ah IMF’s Heavily Indebted Poor Country Initiative, kaas oo u oggolaanaya Soomaaliya inay hesho deyn cafinta.
Spain ayaa ku dhawaaqday intii lagu guda jiray shirkii Iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ee lagu qabtay Muqdisho 7dii Diseembar 2020, inay doonayso inay bixiso tabarucaad ka badan 4 milyan oo Yuuro.
Spain waxay hogaamineysaa Ciidamada Badda ee Midowga Yurub ee Geeska Afrika iyo Howlgalka Atalanta, ee ka dhanka ah burcad badeedka.
Wasiirka Warfaafinta Dowladda Federaalka oo eedaymo usoo jeediyay Kenya
Khabib Nurmagomedov oo noqday xiddiga ciyaaraha caalamka ee sanadkan ee BBC-da